Maalinta keliya ee uu baroortay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi | Hangool News
Maalinta keliya ee uu baroortay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-Un oo kamid ah hogamiyeyaasha caalamka ee aadka looga qabo taliskooda, dalkiisana uu go’doon ku jiro, maadaama uusan xiriir wanaagsan la lahayn dalalka reer galbeedka ayaa waxaa adag in wax badan laga ogaado nolashiisa iyo dabeecadihiisa.
Kim Jong-Un, waxaa lagu tilmamaa in uu yahay hogaamiye aad u ad adag, dalkiisa gacan bir ah ku qabtay.
Kim Jong-Un ayaa baroortay oo aad u ooyay maalintii u dhintay aabihii oo lagu magacaabi jiray Kim Jong-il, kaas oo dhintay 17-kii bishii Disembar ee sandkii 2011-ka.
Kim aabihii ayaa u dhintay xanuun wadnaha kaga soo booday xilli uu ku safrayay tareen. Kim Jong-Un waxaa uu aad uga naxay dhimashada aabihii, maalintii la aasayay na ay tahay maalinta keliya ee la arkay isagoo aad u oynaya.
Aabaha dhalay Kim jong-un ayaa dalkaas maamulayay tan iyo sanadkii 1994, oo uu xiligaas kala wareegay aabihii Kim Il-sung.
Xiligaas waxa uu ahaa nin aad u da’ yar, oo waxbadan ka ogaa qaabkii iyo siyasadihii uu aabihii ku maamuli jiray dalkaas.
Kim, xiligaas wuxuu ahaa shakhsi aad ugu dhawaa abihii markii uu xilka hayay, dabeecadihiisa na qaatay, taasna ay keentay in markii uu dhintay aabihii isaga uu la wareego xilka.
Tacsida aabihii ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb galay kumanaan shacabka dalkaas, kuwaas oo la ooyay, Kim Jong-un iyo eheladiisa.
Dhammaan dadkii ka qeybgalay tacsidaas oo ay kamid ahaayeen saraakiisha ugu sareysa milateriga Kuuriyada Waqooyi ayaa baroortay.
Inkastoo inta badan dadka ay u badan tahay inay aad uga naxeen dhimashada hogaamiyahooda ayaa hadana shacabka dalkaas oo aad uga cabsada dowladda, waxay dadka qaar aaminsan yihiin in oohintii ay oynayaan xilligii tacsida ay ahayd mid aan indhaha dhaafsaneyn, qofwalba oo ka qeybgalay aaska Madaxweynaha na uu ku qasbanaa in uu ooyo, maadaama qofka aanan oynnin uu khatar ugu jiri in laga shakiyo oo la dhibaateeyo.
Dalka Kuuriyada Waqooyi waxaa sahlan in qofka lagu dilo wax aan sidaas u sii weyneyn, taas na ay keentay in dadweynaha ay aad uga cabsadaan dowladda.
Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa markii hogaamiyaha dalkaas, Kim Jong Un uu dilay adeerkii Jang Sang Thaek oo lagu eedeeyay in uu doonayay in uu xukunka ka tuuro Kim.
Sidoo kale dalka Malaysia waxaa sanadkii 2017 lagu sumeeyay nin ay walaalo yihiin madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaas oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cida dishay.
Kim, aabihii iyo awowgii
Kim oo ah siyaasi aad u da’ yar, dhashayna sanadakii 1984 ayaa la sheegay in uu wax ku bartay gudaha dalkaas iyo dibadda, oo waxaa uu wax ku bartay skoolka Liebefeld Steinhölzli ee dalka Switzerland.
Dalka Kuuriyada Waqooyi oo dalalka reer galbeedka ay saaraeen cunqabateyn, adag tahayna in qof ajnabi ah uu tago ayaa go’doon ku jiray sanado badan, maadaama ay xurguf kala dhaxeysay dowlado ay kamid tahay Mareykanka.
Hasayeeshee sanadihii dambe waxaa muuqatay in xoogahaa furfurnaasho laga dareemay dowladda dalkaas, oo dhowr jeer tijaabisay gantaalada ridada dheer, kuna hawlaneyd sameysiga hubka niyukleyka.
Hogaamiyeyaha dalkaas, Kim Jong-un ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay la kulmay hogaamiyeyaal ay kamid yihiin Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka.
Mareykanka iyo Kim Jong-un ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo la isugu soo dhaweynayo labada dhinac, si ay uga wadahadalaan cunaqabateynta saaran iyo sidii dalkaas uu uga tanaasuli lahaa hubka niyukleyrka ee uu doonayo in uu sameysto.